Toa mafana am-boalohany toy ny afo-mololo ihany ny fanohanan’ny mpiara-dia aminy an’ingahy Augustin Andriamananoro, izay nosamborin’ny fanjakana HVM. Tsy re feo ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina kanefa anisan’ny tanan-kavanany sady filoha lefitry ny MAPAR no iharan’ny antsojay. Ny birao politikan’ny MAPAR aza moa tsy mbola nanao fanambarana iraisana fa samy miteny izay teneniny eny ny tsirairay. Toa efa tarazo ao anatin’ireo olon’ny tetezamita ny tsy mifanavotra fa izay iharan’ny antsojay dia taraiky sy resy tanteraka toa an’ingahy Alain Ramaroson, izay niray petsapetsa tamin’ny olon’ny tetezamita ihany saingy rehefa tojo ny sarotra dia tsy misy mpahalala. Hany ka toy ny manome vahana ny mpitondra hisambotsambotra satria tsy misy sahy mijoro hiady ho an’ireny. Na dia nambara aza fa raharaham-pianakaviana dia toy ny fanaovana andrana no nanagadrana an’i Alain Ramaroson mba hijerena ny ho fihetsika sy tanjak’ireo mpiara-manohitra aminy saingy izao iaraha-mahita izao fa tsy nisy sahy nijoro. Vokatr’izany tsy firaharahiana izany dia nosamborina ihany koa i Augustin Andriamananoro satria fantatra fa tsy hisy ny hetsi-panoherana. Tsy ho sarotra amin’ny mpitondra intsony avy eo no hisambotra an’i Andry Rajoelina satria efa hainy amin’ny antsipiriany ny mety ho fihetsik’ireo olona manodidina azy izay tsy miaraka amin’ny resy.